Realme X2 Pro iyo XT waxay bilaabi doonaan helitaanka ColorOS 7 gudaha Hindiya dhowaan | Androidsis
Realme X2 Pro iyo XT waxay bilaabi doonaan helitaanka ColorOS 7 beta gudaha Hindiya si dhakhso leh
Horumarkii ugu dambeeyay, Realme waxay ku dhawaaqday in Realme X2 Pro Waxay u qalmi doontaa ColorOS 7 qaabkeeda beta laga bilaabo Diseembar 18 ee Shiinaha. Waxyar kadib markaan tan bartay, waxaa la soo sheegay in tan iyo tan labadaba Realme XT waxaa dhawaan laga bilaabi doonaa Hindiya.
Hindiya, marka lagu daro soo dhaweynta qalabkan, sidoo kale waxay heli doontaa beta-ka ColorOS 7, lakabka habeynta ee lagu dhawaaqi doono bisha Diseembar 26 halkaas oo loogu talagalay kuwan iyo kuwa kale.
Macluumaadkan wuxuu nooga imaanayaa iyada oo loo marayo madaxa Realme India Madhav Sheth, oo ku soo qoray Twitter si uu ugu dhawaaqo. Maxaa intaa ka badan, Sheth wuxuu sheegay inuu daaha ka qaadi doono waqtiga cusboonaysiinta ee ColorOS 7 (Realme Edition) Nofeembar 25., hal maalin ka hor intaan la bilaabin ColorOS 7 gudaha Hindiya.
Hubinta faahfaahinta ugu dambeysa, waxaan heysanaa xoogaa horumar ah oo ku saabsan UI-gaaga gaarka ah!
Waxaan ku dhawaaqi doonaa waqtiga cusboonaysiinta Isniinta soo socota.
Oo waxaan dhawaan sii deyn doonnaa ColorOS 7 Beta loogu talagalay # realmeX2Pro iyo #dhammaan. #DareToLeap
- Madhav 'Super50w' (@ MadhavSheth1) November 22, 2019
ColorOS 7 ayaa la soo saaray horraantii toddobaadkan waxayna bilaabi doontaa inay u soo rogto taleefannada casriga ah ee loo yaqaan 'Oppo smartphones' laga bilaabo Nofeembar 25th iyo qalabka Realme laga bilaabo Febraayo 2020. Laakiin, jadwalkan waxaa loogu talagalay suuqa Shiinaha, iyo jadwalka hirgelinta ee suuqyada kale way ku kala duwanaan karaan, sida ay tahay Hindiya. Waxaan ka heli doonnaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan daahfurka ColorOS 7 ee Oppo iyo Realme casriga ah ee Hindiya usbuuca soo socda.
Realme X2 Pro waa terminal-dhamaadka-sare ah oo la bilaabay bishii Oktoobar iyada oo leh Snapdragon 855 Plus, shaashad dhan 6.51-inch Super AMOLED oo leh aaladda biyaha lagu duubo ee loogu talagalay kamaradda is-weydaarsiga 16 MP, kamarad afar geesle ah oo ah 64 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP, RAM ah 6/8/12 GB, meel keyd ah oo gudaha ah oo ah 64/128/256 GB iyo batari 4,000 mAh ah oo lagu soo oogi karo min madhan ilaa buuxda 35 daqiiqo oo keliya iyada oo ay ugu mahadcelinayaan 50 watt oo si dhakhso ah u buuxinaysa farsamada ay leedahay.
Realme XT wuxuu helaa waxqabadka Nightscape ee kamaradda hore
Realme XT, dhanka kale, waxaa lagu dhawaaqay bishii Sebtembar isagoo ah mobiil leh Snapdragon 730G, oo ah 6.4-inji Super AMOLED shaashad leh, 16 kamarad sawir qaade ah, 64 MP + 8 MP + 2 MP + gadaal ah module sawir. 2 MP iyo batari 4,000 Mah ah oo wata 20 watt oo degdeg ah. Fursadaha xusuusta ee RAM iyo ROM ee qalabkan waa sida soo socota: 4/6/8 GB iyo 64/128 GB.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Realme X2 Pro iyo XT waxay bilaabi doonaan helitaanka ColorOS 7 beta gudaha Hindiya si dhakhso leh
Taxanaha 'Honor V30' waxaa la xaqiijiyay inuu leeyahay Kirin 990 5G wuxuuna ujeedkiisu yahay inuu qaali noqdo sida Mate 30
Nokia ayaa soo bandhigeysa taleefan cusub bisha Diseembar